Fantsom-boalavo vy fampidirana amin'ny fampiharana fantsona varahina
Tube fantsom-pandrefesana avo lenta matetika mankany amin'ny Tube Copper
Ny tanjona dia ny manamboatra fantsom-by amin'ny fantsom-barahina ao anatin'ny 60 segondra amin'ny alàlan'ny firaka flux sy brazing.
DW-UHF-10kw fampidinana brazing heater
Coil telo heny fihodinana telo
• fantsom-by vy sy mpandray varahina
• firaka braze (CDA 681)
• Fivoahana B-1
Silo: eo ho eo ny 1750 ° F (954 ° C)
Frequency: 148 kHz
Ny fizarana fivoriambe dia efa natambatra mialoha ary namboarina (B-1) avy eo hita tao anaty coil roa savaivony ary nisy peratra firaka vita tamin'ny alim-borona efa napetraka teo amin'ny faritra misy ny interface.
Fantsona firaka sy mpiray no vita tao anatin'ny 60 segondra.
Ny fitaovana dia nampangatsiahina tao anaty rano taorian'ny fahavitan'ny induction brazing.
Avy eo dia notapahina ilay fiarahamiasa mba hanamarina fa ny fizotran-tsokosoko dia niteraka firaisana matanjaka sy avo lenta.
Miraikitra mateza matevina miaraka induction heating
Sokajy Technologies Tags brazing, Fantsona vy matevina, fantsom-by vy mankamin'ny fantsom-by, mividy heater brazing fampidirana, HF fantsom-boalavo, fampiasana hafanam-be avoaka, induction brazing, induction brazing heater, induction bridging process, fantsom-by vy, fantsona vy mankany amin'ny fantsom-by vy Post Fikarohana